Al-shabaab oo seddex qof ku toogtay Magaalada Muqdisho – GEELLE MAG
Wararka laga helayo Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in rag ku hubeysnaa bustoolado ay xalay fiidkii qeybo ka mid ah degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ku toogteen Seddex ruux, iyaga oo la sheegay in ragaasi ay baxsadeen.
Dilka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay agagaarka Baar ha i dhaafin ,isla markaana Seddexda ruux ee la dilay waxa ay wateen Mootada nooca laba lugaaleeda ah ee loo yaqaano Fekon.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya waxa ay ahaayeen ragaas la dilay, waxayna wararka qaar sheegayaan in ay ahaayeen dad Shacab ah, halka Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyada dilkaasina ay sheegeen in ragaasi ay ka tirsanaayeen Nabadsugida Soomaaliya gaar ahaan kuwa dharcadka ah.
Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dilka kadib ay goobta soo gaareen Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya, kuwaas oo goobta ka qaaday meydka ragii la dilay, sidoo kalena ay sameeyeen howlgallo aan wax natiijo ah kasoo bixin.
Mas’uuliyiinta Maamulka degmada Waaberi iyo taliska Booliska weli kama aysan hadlin dilka ka dhacay degmadaasi, dilkanna waxa uu kusoo aadayaa xilli maalmihii la soo dhaafay amniga Magaalada Muqdisho uu ahaa mid soo hagaagayey.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay Magaalada Washington